Maarso | 2010 | WEEJIDOW
Archive for Maarso, 2010
Booqashadii Guddoomiyah Baarlamaanka Sheekh Aadan Mohamed Nuur ( Aadan Madoobe )ee dalka Spain
Maarso 31, 2010
Guddoomiyah Baarlamaanka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Mohamed Nuur ( Aadan Madoobe ) iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay ka mid yihiin Xildhibaano ayaa booqasho rasmi ah ku yimid Waddanka Spain 23kii Bisha Maarso 2010.
Spain oo haatan haysa Madaxtinimada yurub ayaa waxay marti gelinaysaa afhayeennada baarlamaanka waddamada reer yurub iyo waddamada ay gumaysan jireen oo haatan xorta ah, kuwaasoo kala ah qaaradda yurub iyo waddamada la yiraahdo Karebiyanka.
Guddoomiyaha ka hor inta aannu amba bixin Jasiiradda Tanariif ee waddankan Spain oo uu ka dhacayo kulanka baarlamaannada Yurub, Afrika, iyo Kareebiyanka, ayaa waxaa kulamo kala duwan la yeeshay masuuliyiin sar sare oo waddanka Spain ah.
Sidoo kale guddoomiyahu waxa uu booqday labada aqal ee kala ah seneetka mudane Javier Rojo iyo kan kongareeska mudane JOSÉ BONO MARTÍNEZ halkaas oo uu kula kulmay afhayeennda labada aqal kuwaasoo guddoomiyahu uga warramay xaaladda baarlamaanka Soomaaliya iyo baahida loo qabo in loo helo dhaqaale, tababarro iwm, waxayna ballanqaadeen in ay wax weyn oo la taaban karo loo qabto dowladda ku meelgaarka ah, dowladda Spainna ay ka go’antahay arrintaas, ka dib Guddoomiyaha waxaa casho sharaf u sameeyay afhayeenka baarlamaanka Spain.
Guddomiyaha waxa uu 25tii bishan Maarso la kulmay wasiirada gaashaandhigga ee dalka Spain Marwo Carme Chacón iyo kornel Gonzales oo ah madaxa tabarka ciidamada soomaaliya ee Uganda, halkaas oo uu salaam sharaf kaga qaatay ciidanka xarunta wasaradda gaashaandhig.
Dhanka kale waxa uuna guddoomiyahu u mahadceliyay dowladda spain sida hagar la’aanta ah oo ay u taageerto dowladda ku meelgaarka ah, isla markaana ay muhhim tahay sidii loo soo celin lahaa nabadgelyada iyo kaladanbeeynata Soomaaliya. Guddoomiyahu waxaa uu la kulmay 26kii bishan wasiirka arrimaha dibadda Spain mudane Miguel Ángel Moratinos, kaasoo ka dhagaystay guddoomiyaha xaaladda waddanka maanta ku suganyahay iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in Spain ay sii waddo kaalmada ay u fidiso Dowladda ku meelgaarka ah, tee da kale wasiirka ayaa isna adkeeyay in Spain aanay ka caajiseeynin Soomaaliya ilaa ay ka aragto Soomaaliya oo Nadad ah.
Ka dib guddoomiyahu waxaa uu u baqoolay Jasiiradda Tanariife ee Spain halkaas oo 29ka bishan ka furmaayay (Africa-Caribbean-Pacific), kaasoo socon doona saddex maalmood wixii ka soo baxa dib ayaan idinkaga soo sheegi doonnaa, Soomaaliya waxa ay hadalka leedahay 31ka Maarso oo ah Maanta oo arbaca ah.
War Deg Deg ah: Dagaal xooggan oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah Degmada Shibis
Muqdisho:-Dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadisa kale duwan ayaa waxaa uu maanta ka dhacay magaalada Muqdisho dagaalkaas oo u dhexeeyey Al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan DFKM.Dagaalka ayaa waxaa uu ka dhacay qaybo ka mid ah Degmada Shibis,dagaalka ayaa qarxay ka dib markii ciidamad Al-shabaab ay weerar ku qadeen fariisamo ay ciidanka DFKM ku lahaayeen Degmada Shibis.
Saraakiil u kala hadlay DFKM iyo xoogagga Al-shabaab ayaa qolo walba waxaa ay sheegteen in ay guulo ka gaareen dagaalka ka dhacay Degmada Shibis qolo walba ayaa gooni u sheegtay in ciidankooda uu la wareegay fariisamihii saaka uu dagaalku ka dhacay.
Xaalada goobihii lagu dagaalamay ayaa waxaa ka jirta deganaasho aan cago badan ku taagnay iyadoo weli ay is horfadhiyaan ciidamadii dagaalku dhex maray, Dagaalka ka socda Xaafada magaalada Muqdisho ayaa u muuqda mid aan weli lagu kala adkaan oo maalinba qolo ay horumar samaynayso iyadoo aan la saadaalin karin dagaalo waaweyn oo la filayo in ay dhawaan ka qarxi doonaa Koonfurta Soomaaliya gaar ahaa magaalada Muqdisho.
War Deg Deg ah: Ahlu Sunnah oo ugu baaqey xubnaha ugu sareeya DFKMG in ay si deg deg ah isku casilaan
MUQDISHO:- Culumaa’udiinka Ahlsunna Waljameeca ayaa ku eedeeyey saddexda Mas’uul ee uga saraysa Dowladda KMG ee Soomaaliya dad aanan kasoo bixin waajibkoodii qaran.
Xubno sar sare oo ka tirsan Culumaa’udiinka Ahlusunna Waljameeca kullana ku yeeshay Caasimada magaalada Muqdisho ayaa si caro leh ugu baaqay saddexda Mas’uul ugu saraysa Dowladda KMG ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Sheekh Aadan Madoobe, iyo Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke in ay iscasilaan kana tagaan xilalka Soomaaliya ka hayaan.
Culumada oo Salaasadii kulan ku qaatay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay Dowladdii C/laahi Yuusuf Axmed markii ay jirtay kooxaha hubaysan isku dayin in ay burburiyaan Qabuurayaasha Culumaa’udiinkii hore, laakiin markii la soo doortay dowladda Shariifka meelo badan laga qabsaday lana faagay Qabuurayaasha Culumaa’udiinkii hore.
Sheekh Soomow oo ka dhex muuqday Culumaa’udiinkii shirka ku yeeshay magaalada Muqdisho kana hadlay marka kullankii dhammaaday ayaa sheegay in ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ugu horayso baaqa xil ka dagista madaxda Dowladda KMG ee Soomaaliya, in xer walba soo diiwaan geliso 20 dhalinyaro ah oo Ciidan ahaan maamulka culumaa’udiinka Ahlusunna Waljameeca u qaadanayo, kadibna dagaal jihad ah ku dhawaaqi donaan sida uu hadalka u dhigay.
Sheekh C/qaadir Soomow ayaa ugu danbeyntii kullanka maanta ka sheegay marka qorista Ciidamadaasi dhammeeyaan dagaalo culus kula geli doonan Degmooyinka Gobolka Banaadir Ciidamada Xarakada Al-shabaab iyo kuwa Ururka Xizbul islaam oo dagaal diimeed kala dhaxeeyo.
War Deg Deg ah: Alshabaab oo laga cabsi qabo in weerar ay ku soo qaado Dhuusa-mareeb & bandow xalay lagu soo roagay deegaanka
Waxaa saakay caadi ku soo laabtay xaalada guud ee magalada Dhuusa-mareeb oo xalay Bandow ay ku soo rogayn culumaa’udiinka Ahlu-sunah ayadoona la sheegayo in xalay oo dhan laga maqlayay Degmada Dhuusamareeb Gobolka Gal-gaduud rasaas xoogan oo aan la ogeyn ilaa haatan sababata ka danbeysa rasaastaasi.
Wararka aynu ka heleyno Degmada Dhuusamareeb Xarunta Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi xalay laga maqlay rasaas xoogan taasi oo cabsi xoogan abuurtay dadka deegaanka oo baryihii uguu danbeeyay isha ku hayay xaalada gobolka.
Magaalada ayaa xalay aheyd mid lagu soo daadiyay Cidiamada Ahlu sunnah oo dhammaan magaalada saaray Bandow aan horay loo filaynin iyadoo wadooyinka waa weyn ee magaaada laga maqlayay rasaas xoogan oo ay ku ridayeen ciidmda laga maqlayay.
Dadka ayaa haatan ka walaacsan Dhaqdhaqaaq iyo cabsi guud ahaa ka taagan magaalada, waxaana laga baqnayaa in ay weerar soo qaadaan Xoogaga Alshabaab oo magaalada meel ku dhow shalay galabta soo saldhigtay.
Guud ahaan saakay ayaa waxaa caadi ku soo laabtay xaalada guud ee magaalada ayadoona ilaa saakay ay jirto cabsi laga qabo in dagaal ay soo qaadaan Xoogaga Alshabaab ee fadhiisinka soo dhigtay duleedka magaalada sida ay sheegayaan dadka deegaanka.
Shariif iyo Melez oo ka tashana Wasiirada cusub
Maarso 30, 2010
Waxaa caawa magaalada addis ababa ku sugan wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Sheekh Shariif o galabta kasoo ambabaxay dalka Kenya, sida aanu ilowareedyo ku heleyno waxaa uu madaxweynaha halkaasi u tagay latashi golaha cusub ee wasiirada ee la filayo in lagu dhawaaqo bisha April horaanteeda ee ay dowladu heshiiska kula gashay ururweynaha Ahlusuna Waljameeca.
Madaxweynaha ayaa casho waxaa uu la cunay Raiisulwasaaraha dalka Itoobiya Melez Zanawi oo lagu qancin doono Shariif dowladiisa sida ay noqon doonto shaxda golaha wasiirada cusub iyadoo ilaa iyo hada la ogyahay in wasiirada cusub ay ka dhexmuuqan doonaan rag xulufo hoose la ah dowladda Itoobiya taas oo ka dhigeysa mid ay Itoobiya aad u dooneyso in ay golaasi ku jiraan rageeda.
Madaxweynaha ayaa isla berito u duuli doona dalka Jabuuti halkaasi oo uu kula kulmi doono Madaxweyne Ismaciil Cumar Geele iyadoo sidoo kale ay arinta safarku ku taxluuqdo isla golaha cusub ee la dhisi doono, waxaana Madaxweyne Geele oo isna haatan u muuqda siyaasiyiinta waxlaga weydiiyo arimaha Soomaaliya taas oo noqoneysa in ay Jabuuti cariiri ku heyso Itoobiya faragelinta siyaasadaha cakiran ee Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxaa uu dib ugu soo noqon doonaa dalka Kenya isla maalinta berito ah kolka uu kasoo ambabaxo dalka Jabuuti isagoo habeen ku hakan doona Neyroobi kadibna u baqooli doono Muqdisho.
Hogaamiyaha Xisbul Islaam oo Burcad badeeda Soomaalida u qabtay in mudo 48-saac ah ay ku sii daayaan Maraakiibta iyo Doonyaha uraran ganacsatada Soomaaliyeed.
Hogaamiyaha Ururka Xisbul Islaam Sheekh Xasan Daahir Aways ayaa waxa uu kooxaha Burcad badeeda Soomaalida u qabtay in mudo 48-saac ah ay ku sii daayaan Maraakiibta iyo Doonyaha uraran ganacsatada Soomaaliyeed ee ay ku haystaan biyaha Soomaaliya.
Sheekh Xasan Daahir Aweys hogaamiyaha Ururka Xisbul Islaam oo galabta shir jaraa’id qadka taleefoonka ugu qabtay qaar kamid ah Warbaahinta Muqdisho ayaa soo hadalqaaday arin u muuqatay in ay Maskaxda kaga taagneyd xiisadeeduna ay si toos ah u soo baxday 24-kii saac ee uu ugu danbeeyay taasi oo ah weeraro ay burcad badeeda Soomaalida ku qaadeen Maraakiib iyo Doomo shixnado u siday ganacsato Soomaaliyeed taasi oo wax u muuqda xiisad ganacsi ka dhax abuurtay suuqyada.
Sheekh Xasan Daahir Aways ayaa sheegay in Burcad badeeda ay awalba ku jireen danbiyo sida uu hadalka u dhigay hadana ay bilaabeen weeraro uu ku tilmaamay in ay cuno qabatayn ku tahay shacab uu sheegay in awalba dhibaato kale ladaalaa dhacayee, waxuuna hadalkiisa sii raaciyay in arintaasi ay noqotay mid ay u dulqaadan waayeen isagoo burcad badeeda ugu baaqay in ay siidaayaan Maraakiibta iyo Doomaha u kiraysan Ganacsatada Soomaaliyeed mudo ku siman 48-saac.
Sheekh Xasan Daahir Aways ayaa Shirkiisa ku soo hadalqaaday heshiiskii 15-kii bishan dhaxmaray dowladda KMG iyo culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca isagoo tilmaamay in heshiiskaasi uu ahaa qiyaano iyo Shirqool ayna ka danbeeyeen Cadow ay iyaga la dagaalamayeen sida uu hadlka u dhigay.
Shirka jaraa’id ee hogaamiyaha Ururka Xisbul Islaam ayaa waxa uu ku soo hadalqaaday arimo kala duwan, waxana uu ka jawaabay su’aal ay sigaar ah u weydiisay Idaacada Shabelle taasi oo aheyd in ku soo laabashadiisii magaalada Muqdisho oo hadda laga joogo mudo ka badan 1-sano oo uu shacabka ugu baaqay in ay sabraan mudo kale oo dagaalo dalka kaga saarayaan ciidamada shisheeye bal in uu dhamaaday waqtigaasi, waxana uu yiri dagaalada weli waa ay sii socon doonaan xitaa hadii ay qaataan sanado kale.
Sheekh Xasan Daahir Aways ayaa mar la waydiiyay sida uu u arko howsha ay Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ku burburinayeen qaar kamid ah qubuuraha culumada Ahlu dariiqada waxaa uu si kooban u sheegay in ay jireen waxyaabo xadgudub ah oo ay dadka qaar ay qubuurahaasi ku aksameen jireen isagoo dhinaca kale soo hadalqaaday dilkii bishan magaalada Muqdisho loogu geystay Barre Cali Barre oo ka tirsanaa Saraakiisha Ururka Xisbul Islaam, waxaana uu sheegay in dilkaasi uu ahaa mid shir qool ah oo ay baaritaano ku wadaan.
War Deg Deg ah: Shabaabka oo rasaas ku furay Diyaarado jawi hoose ku socday oo ku soo dhowaaday Marka
Xoogaga Alshabaab ee magaalada Marka ayaa maanta rasaasta ka dhacda qoriga Lidka Diyaaradaha iyo kuwa garbaha laga rido ku weeraray Diyaarado Helicoptero ah oo jawi hoose ku duulayay, kuwaasoo ku soo dhowaaday Xaafadaha Marka.
Diyaaradaha ayaa qal qal geliyay dadka ku nool magaalada Marka, waxaana ay ka yimaadeen dhinaca Bada oo la rumeysan yahay in ay ka soo kaceen Maraakiib fadhisay xeebaha.
Rasaasta lagu caabiyay diyaaradahaas ayaa ahaa kuwo laga maqlayay magaalada Marka, taasoo dadweynaha cabsi iyo wal wal ku abuuray, waxaana dhawaqa rasaasta ay aheyd kuwo aad isu qabsatay.
Sarkaal u hadlay Xarakada Alshabaab ayaa sheegay in diyaaradaha oo ahaa labo ay waxyeelo gaarsiiyeen mid ka mid ah, isla markaana ay carareen, inkastoo aan la heyn war ka madax banaan sheegashada sarkaalkaas.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa degmada Marka lagu arkayay diyaaradaha jooga hoose ku duulaya, waxaana walaac badan ka muujiyay dadweynaha oo ka cabsi qabay in ay weeraro geystaan.
Tani ayaa noqoneysa fariin ku socota diyaaradaha ka soo kaca Maraakiibka dowladaha shisheeye ee ku sugan xeebaha Soomaaliya, kuwaasoo lagu arko magaalooyinka qaar iyagoo dul heehaabaya.
Qarax maanta ka dhacay beerta Cali Mahdi oo ku taala Afgooye
Qarax geystay dhaawacyada 3-qof oo ka mid ahaa shaqaalaha beer uu meel 10-km u jirta degmada Afgooye ku lahaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa maanta dhacay.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaraxa, kuwaasoo qaarkood ay sheegayaan inuu ahaa bam lagu weeraray ilaalada beertaas, halka kuwo kalena ay sheegayaan inuu ahaa mid ka qarxay ilaalada beerta oo qaarkood ay dhaawacyo qabaan.
Qaraxan ayaanay jirin wax hadal ah oo ay kasoo saareen maamulka Degmada Afgooye ee Ururka Xisbul Islaam, iyadoo xaaladdu ay daggan tahay haatan, waxaana dhaawacyadii loo qaaday Isbitaalka Dayniile.
Goobjooge diiday inuu magaciisa sheego ayaa u xaqiijiyay HOL in qaraxa oo keliya ma maqlay, balse aan tafaasiil laga bixin karin, iyadoo tani ay noqonayso markii ugu horreysay oo qarax caynkaan ah lala beegsado beertan.
Cali Mahdi Maxamed ayaa 1991 loo doortay inuu Madaxweyne ka noqdo Soomaaliya inkastoo uusan xilligii uu hoggaanka hayn lahaa aanu dhameysan sababo la xiriira dagaallo sokeeye oo ka bilowday Muqdisho.
Haatan Mudane Cali Mahdi wuxuu ku nool yahay dalka dibaddiisa, wuxuuna lasoo shaqeeyay xukuumado ka dambeeyay sida xukuumaddii uu Madaxweynaha ka ahaa Col. C/llaahi Yuusuf Axmed isagoo ahaa guddoomiyah shirkii dib u heshiisiinta ee lagu qabtay Muqdisho.
War Deg Deg ah: Nabdoon ka tirsan Odayaasha Hawiye oo toogasho lagu dilay iyo qabuuro xalay si yaab leh loo burburiyey
Maarso 29, 2010
Nabadoon ka tirsan Odayaasha Beelaha Hawiye ayaa toogasho lagu dilay maqribnimadii xalay deegaanka Lafoole ee degmada Afgooye, iyadoo dilka nabadoonkaas ay geysteen dhalinyaro Hubeysan.
Gudoomiyaha Odayaasha Hawiye Maxamed Xasan Xaad ayaa xaqiijiyay dilka nabadoon ka tirsan Odayaashooda, kaasoo lagu magacaabo Cabdi Maxamed Jimcaale.
“Runtii dilkaas aad baan uga xunahay, nabadoonkaas waxaa dilay gacan ka xaq daran, saameyna naguma yeelaneyso howlaheena”ayuu yiri Maxamed Xasan Xaad.
Mr Xaad ayaa sheegay in ay dilkaas uu qeyb ka yahay dilalka qorsheysan ee ka jira Caasimada Muqdisho, kaasoo uu ku tilmaamay mashruuc muddo soo socday oo dadka lagu leynayo.
Odayaasha Hawiye garabka uu Xaad hogaamiyo ayaa ah kuwo dhex dhexaad ka ah xaaladaha ka jira Muqdisho iyo khilaafka u dhaxeeya dhinacyada isaga soo horjeeda, iyadoo dhinacyadaas u wada jeediya baaqyo nabadeed.
Warar kale, Qabuuro ku yaal degmada Xamar Jajab oo ka mid ah goobaha ay ka tirsan Dowladda KMG ayaa xalay si layaab leh loo buriyay, iyadoo looga shakisan yahay in qabuurahan ay bur buriyeen Xarakada Alshabaab oo maalmahan qabuuro bur burin ka waday Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in qabuurahan laga bur buriyay hareeraha Masaajidka Sheekh Muxiyadiin oo ku yaal degmada Xamar Jajab, hase ahaatee aanu la bur burin qabriga mid ka mid ah Mashaa’ikh aad loo yaqaano oo masaajidkaas ku dhex aasnaa.
Darbiyo ku wareegsanaa qabriga ayaa la sheegay in ay bur buriyeen, iyadoo xalay saqdii dhexe laga maqlayay degmadaas hugunka bur burinta lagu hayay qabriyaasha.
Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in xalay deegaankooda ay ka seexan waayeen bur burinta lagu hayo qabriga, iyadoo dhalinyarada bur burisay qabrigaas ay ahaayeen kuwo tababaran oo isku gadaamay nawaaxiga Masaajidka ay ka dhacday bur burinta.
Arrintan ayaa waxay tahay fariin aan sahlaneyn oo ku socota Dowladda KMG, taasoo ah in Shabaab ay sidee doonaan ka yeelan karaan xeyndaabka kooban ee ay ka taliso Dowladda Soomaaliya oo haatan ku soo uruureysa wax ka yar 3KM.
Ma jirto ilaa iyo hada mas’uul dowladeed ama mas’uul degmo oo ka hadlay dhacdadaas, waxaase saaka dadka deegaanka ay aad u hadal hayaan qabuuro bur burinta laga sameeyay degmada Xamar Jajab, xilli maalmihii la soo dhaafay ay Shabaab qabuuro ku bur buriyeen qabuuro ku yaal deegaano ay ka arimiyaan.
War Deg Deg ah: Afhayeenkii Ciidanka Booliska Col.Bariise oo ku dhaawacmay Iska horimaad hubeysan oo ka dhacay Xaafada Afisyooni
Maarso 27, 2010
Muqdisho:-Waxaa saaka iska horimaad hubaysan uu ku dhexmaray Xaafada Afisyooni ciidamo ka tirsan Booliska DFKM iyo kuwa Milateriga ee DFKM, iska hor imaadka ayaa bilowday xili ay ciidanka Boolisku ay ku howl jireen howl galo bur burin ah ayaa waxaa goobta soo gaara ciidamo ka tirsan kuwa Milateriga oo rasaas ku bilaabay.
Iska horimaadka 2 ciidan ee ka tirsan DFKM ayaa waxaa la sheegayaa in uu dhaawac ka soo gaaray Afhayeenkii ciidanka Booliska DFKM Col. C/laahi Xassan Bariise oo tacshiirada ay fureen ciidanka Milateriga ay haleeshay.
Dhaawaca soo gaaray Afhayeenkii ciidanka Booliska DFKM Col. C/laahi Xassan Bariise ayaa waxaa la dhigay Isbitaal ay ciidanka AMISON ku lee yihiin Garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, ilaa hadda ma cada sababaha dhaliyey iska horimaad hubeysan oo u dhexeeyey 2da ciidan oo ka tirsan DFKM.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Maarso, 2010.